I-Technique | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Sigcina i-daikon ebusika, zokupheka
Isidakamizwa ngumkhiqizo wonyaka. Noma kunjalo, iqukethe izithako ezisebenzisekayo kakhulu ehlobo. Ukulondoloza izinzuzo zempande kungavuna ebusika. Futhi indlela yokulondoloza izinhlobonhlobo ezihlukahlukene ze-daikon, cabanga ngokuqhubekayo kulesi sihloko. Izinzuzo zomzimba uDaikon - imifino yezimpande, i-analogue yesithombo. Ungabhala izincwadi mayelana nezinzuzo zalo mifino: I-Daikon iqukethe lonke uhlu lwamavithamini B (kusuka ku-B1 kuya ku-B12).
Iyini ifosholo ene-screw, nokuthi ungayenza kanjani wena ngokwakho
Ngisho nokufika kwebusika, ukusebenza egcekeni nasensimini akumeli. Ukukhishwa kweqhwa kuyinkqubo echitha isikhathi esiningi, edinga izindleko zomzimba ezihlaba umxhwele kumuntu. Kodwa kuthiwani ngalabo abathi, ngenxa yobudala noma ukugula, abakwazi ukukwazi ukuguqula ihlumela ngokuqinile? Abalimi abaningi abahlakaniphile abanakekela impilo yabo futhi abafuni ukuchitha isikhathi esiningi nemizamo ekwenzeni umsebenzi owenziwe ngokweqile ngokusebenzisa i-snow blower.
Isomiso esiphezulu se-Ezidri Snackmaker FD500
Abomiseli bendlu yasimanje yindlela enhle yokugcina isikhathi nokwenza imikhiqizo enempilo yomndeni wonke. I-Ezidri Snackmaker i-dryer ye-FD500 eyingqayizivele iyisinqumo esihle kakhulu esizokumangaza ngezici zayo. Lona yi-jack ephelele yazo zonke izingcingo, eguqulelwe izinketho ezihlukahlukene zokomisa.
Umshini womhlaba wonke Ezidri Ultra FD1000
Kukhona inkulumo enhle kakhulu - "Lungisa i-sleigh ehlobo ...", okusho ukuthi udinga ukulungiselela ubusika kusengaphambili. Lokhu kusebenza futhi ekuthengeni kwemikhiqizo. Ukungabi namavithamini akuzwa nje umzimba womuntu obusika ozodla imifino, izithelo nemifino ngokuqukethwe okuphezulu kakhulu.
Indlela yokwenza i-rock scraper amazambane kusuka ebhayisikili elidala
Wonke umuntu onokuhlangenwe nakho ekulimeni amazambane ujwayelene nobuchwepheshe bombhalo wezintaba eziphakeme. Ukuze wenze le nqubo ibe lula, ungenza i-excavator ebhayisikili ngezandla zakho. Isimiso sokusebenza Indlela yokunciphisa umsebenzi wakho, kulula ukuyiqonda. Isimiso se-hiller ekwenziwe ngamazambane silula.
Indlela yokutshala utshani ngesandla oblique
Kunezimo eziningana lapho kutholakala khona isikhala esikhwameni sasehlobo noma isiqephu sezwe singakwazi ukufika kahle: izimvula zidlulile, kanti utshani bukhule kakhulu; kunotshani obuningi bokucubungula futhi akukho mqhubi wensimbi; udinga ukuhlwanyela utshani endaweni engakhululekile yomcibisholo wensimbi (inhlabathi engafanele, eduze kwezihlahla noma izihlahla).
Izici zokulima kanye nezinhlamvu ezihlukahlukene utamatisi Mazarin
Indlela yokwasawoti u-squash ebusika: iresiphi yesinyathelo ngesinyathelo sokupheka
ISansevieria cylindrical - ukunakekelwa kwasekhaya
Yini engcono kune-chainsaw noma i-saw saw: isibuyekezo sokuqhathanisa amayunithi
Iyini i-Parsley Mooskrause 2, ikhula kanjani futhi isetshenziswe kanjani?
Kuziphi izimo udinga ukugeza iklabishi ye-Peking ngaphambi kokupheka nokuthi ungayihlanza kanjani?
Brusvyana - ukulungiswa okufana nesihlahla
Engadini sitrobheli Lord - uhlobo zakudala sitrobheli